Isitoreji Se-cloud Somsebenzi Nasekhaya - I-Google Drayivu
Iya kuDrayivu Zama IDrayivu yethimba lakho
Ukufinyelela okulula futhi okuvikelekile kukho konke okuqukethwe kwakho
Gcina, yabelana, futhi hlanganyela kumafayela namafolda ukusuka kunoma iyiphi idivayisi yeselula, ithebhulethi, noma ikhompuyutha
Izinhlelo zokusebenza zokusebenzisana zaku-cloud ezinikeza amandla adlulele emsebenzini wethimba
IDrayivu ihlangana kalula nokuthi Amadokhumenti, AmaSpredishithi, nokuthi Amaslayidi, izinhlelo zokusebenza zaku-cloud ezivumela ithimba lakho lisebenzisane ngempumelelo ngesikhathi sangempela. Dala futhi yabelana ngokuqukethwe nethimba lakho ngoSuku 1, ngaphandle kwesidingo sokuthutha usuka kumathuluzi akhona kakade.
Ukuhlanganiswa namathuluzi nezinhlelo zokusebenza ezivele zisetshenziswa ithimba lakho
IDrayivu ihlanganisa futhi iphelelise ubuchwepheshe bethimba lakho obukhona kakade. Hlanganyela kumafayela e-Microsoft Office ngaphandle kwesidingo sokushintsha amafomethi efayela, futhi uhlele futhi ugcine izinhlelo zamafayela engeziwe angaphezu kuka-100, okubandakanya ama-PDF, amafayela e-CAD, izithombe, nokunye.
Ubuchwepheshe be-AI ye-Google kanye Nosesho busiza ithimba lakho lisheshe nakakhulu
Amakhono osesho lwe-Google olunamandla ashumekwe kuDrayivu futhi anikeza ijubane elinganakuqhathaniswa, ukusebenza, nokwethenjelwa. Futhi izici ezifana nokuthi Okubalulekile zisebenzisa I-AI ukuze zibikezele lokho okufunayo futhi ziveze okuqukethwe okufaneleka kakhulu—okusiza ithimba lakho lithole amafayela isikhathi esishesha kakhudlwana ngo-50%.
Zizwise ngeDrayivu kunoma iyiphi idivayisi
IDrayivu isebenza kuzo zonke izinkundla ezinkulu, okukunikeza amandla okuthi usebenze kalula kusiphequluli sakho, idivayisi yeselula, ithebhulethi, nekhompuyutha.
Izinkulungwane zamathimba sezivele zisebenzisa IDrayivu ukuze zishintshe indlela ezisebenza ngayo
“Angilokothi ngikhathazeke ngokuthola idokhumenti. Yonke into ikuDrayivu, ngikwazi ukuyifinyelela noma yikuphi, futhi lokhu kushintshe izinto”.
“Iningi lamalungu ethimba lethu abesevele ejwayelene neDrayivu futhi ayithole ilula kakhulu ukuyisebenzisa, ngakho ukuphathwa koshintsho kube kuncane futhi siqale ukusebenza ngokushesha.”
“Ukusebenzisana kwesikhathi sangempela nge-Google Amadokhumenti kanye neDrayivu kuyinto okumelwe ube nayo...uma singase sizame ukususa abasebenzi kuyona, kungaba nombhikisho omkhulu—isiphithiphithi esikhulu.”
“I-Google ishintsha ukusebenzisana kanye nokukhiqiza komuntu ngamunye nge-AI. Abasebenzi bangagxila ekwakheni okubalulekile kwamakhasimende ethu futhi bachithe isikhathi esimbalwa emsebenzini engabalulekile.”
Abasebenzisi bancamela IDrayivu kunemikhiqizo encintisanayo
Umthombo: G2.com, Inc., February 2020
IDrayivu ihlangana namathuluzi ithimba lakho elivele liyawasebenzisa
Gcina, yabelana, futhi finyelela amafayela namafolda akho ukusuka kunoma iyiphi idivayisi yeselula, ithebhulethi, noma ikhompuyutha—futhi u-15GB wakho wokuqala wesitoreji umahhala.
Siza ithimba lakho lihambe ngokushesha ngenkundla yokusebenzisana egxile ku-cloud evikelekile eyenza ukuthi kube lula ngawe ukuthi wabelane, ugcine, futhi ufinyelele amafayela.
Zama IDrayivu yethimba lakho
Vikela futhi vikela idatha yenkampani yakho Ngokunqandwa Kokulahleka Kwedatha, i-Vault ye-eDiscovery kanye nokufaka kungobo yomlando, kanye nesikhungo sokuvikeleka.
Indaba Eyimpumelelo Ye-Ibotta
Indaba Eyimpumelelo Yeqembu Le-cardinal
Ishidi Lokukhohlisa LamaDrayivu Abelwe
Izindlela Ezingu-3 I-Google Drayivu Engathuthukisa Ngayo Ukukhiqiza Kwethimba Lakho
Izindlela Ezingu-5 Ithimba Lakho Elingaqala Ukusebenzisana nge-Google Drayivu
Uhlu Lokudlalayo Lwe-YouTube Ye-Google Drayivu
Ukuqeqesha Nosizo Lwe-Google Drayivu
Okwabantu Ngabanye - I-Google One
Amathimba - Zama IDrayivu mahhala
Ibhulogi ye-Google Drive